समाज विरोधि गतिविधि नियन्त्रण - Pradesh Today
Homeफिचरसमाज विरोधि गतिविधि नियन्त्रण
समाज विरोधि गतिविधि नियन्त्रण
जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कस्तो छ ?
सामान्य नै छ, छिटफुटमा घटने घटनाबाहेक गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू भएका छैनन् । विशेषगरी चाडपर्वलाई लक्षित गरेर हामीले सुरक्षा रणनीति योजना बनाएका छौँ ।
ति सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दसैँ, तिहार, छठ पर्वलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले मनाउनको लागि हामीले जिल्लाको शान्ति सुरक्षालाई विशेष रूपमा लिने गरेका छौँ । दसैँ शान्तिपूर्ण रह्यो । विगत वर्षहरूको दसैँको तुलनामा यो वर्षको दसँै शान्तरूपमा नै सम्पन्न भयो । आशा छ तिहार पनि शान्तिपूर्ण रूपमै हुनेछ ।
शान्ति सुरक्षाको योजना के–के छन् ?
शान्ति सुरक्षाको लागि एकीकृत सुरक्षा रणनीति योजनाहरू हामीले वर्षभरीकै सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि बनाउने गर्छौ । त्यसैअनुसार जिल्लास्तरका सुरक्षा निकायहरू परिचालन हुने गर्छन् र भईरहेका छन् ।
विशेष अवस्थाका लागि विशेष सुरक्षा योजना पनि बनाउँछौँ । चाडपर्वको लागि चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना, विपद् व्यवस्थापन सुरक्षा योजना लगायत कुनै पनि भिआईपी जिल्लामा प्रवेश भयो भने उहाँहरूको पनि सुरक्षाकोे लागि सुरक्षा योजना बनाउँछौँ ।
त्यस्तै कुनै ठूलो कार्यक्रम हुने भएको खण्डमा पनि त्यसको छुट्टै सुरक्षा योजना बनाउने काम गर्छौ । निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि छुट्टै सुरक्षाको योजना बनाउँछौं । यसरी नै जिल्लाको एकीकृत सुरक्षा रणनीति योजनाहरूअन्तर्गत पृथक–पृथक सुरक्षा योजनाहरू बनाउने गरेका छौँ र त्यही अनुसार सुरक्षा संयन्त्रहरू परिचालित हुने गरेका छन् ।
चाडपर्व विशेष सुरक्षा योजना के छ ?
चाडपर्वको लागि विशेषगरेर चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने हो–हल्लाका कुराहरू, मादकपदार्थ सेवन निरूत्साहित गर्ने कुराहरू, देउसी–भैलोको नाममा विकृति फैलाउने, पटकाजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गर्ने लगायतका यस्ता विषय वस्तुलाई समेटेर हामीले चाडपर्व विशेष सुरक्षा योजना बनाएका छौँ ।
यही विषयमा हामीले नागरिकलाई सचेत बनाउनको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सार्वजनिक सरोकारको सार्वजनिक सूचना पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ ।
जसमा देउसी–भैलोको लागि समय सीमा राति १० बजेसम्म तोकिएको छ । पटका लगायतका विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोगको लागि निरूत्साहित गरिएको छ र चाडपर्वलाई सद्भाव सहिष्णुताको रूपमा मनाउनको लागि सबैमा आग्रह गरेका छौँ । यदि कसैले हाम्रो आग्रहलाई अटेर गरेमा वा हाम्रो आग्रहलाई पालना नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरिने छ ।
त्यसको साथसाथै विभिन्न ठाउँमा हुन सक्ने जुवातासको खेलहरूलाई निरूत्साहितको लागि सूचनाहरू लिने सम्भाव्यता स्थानहरूको पहिचान गरेर छापा मार्ने र त्यसमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्ने काम गरिरहेका छौ ।
दसैंको समयमा कतिजना जुवाडेहरूलाई नियन्त्रण लिनुभयो ?
दसैँभन्दा यता सातवटा समूहलाई नियन्त्रणमा आईसकेका छन् र तिहारको समयमा यस्ताखालका गतिविधिहरू बढन् सक्ने सम्भावनालाई लिएर हामी अलि चनाखो र सतर्क छौँ ।
त्यस मातहतको सबै इकाईहरूलाई पनि त्यही किसिमको चनाखो र सतर्क रहन निर्देशन पनि दिईसकेका छौँ । त्यस्ता गतिविधिहरूमा कोही कतै संलग्न भएको पाएमा नियन्त्रणमा लिएर कारवाही हुन्छ ।
साना जुवाडेहरू मात्रै पक्रिन्छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
जुवाडेहरू साना ठूला भन्ने हुँदैन् । जहाँ जुवा खेलिराखेको छ भन्ने सूचना आउँछ । जानकारी आउँछ । त्यसमा हामीले छापा हान्ने हो । छापा हान्दा खेरी कहिलेकाहिँ ठूलो रकमहरू बरामद हुनसक्छ । पेशा गर्ने खालका जुवाडेहरू पक्रिने अवस्था चाहिँ हुन्छ ।
जसलाई हामीले जुवाडे भन्छौँ । कहिलेकाहिँ रकमहरू पनि सानो हुन्छ । मनोरञ्जनको रूपमा खेखिरहेका पनि नियन्त्रणमा आएका अवस्था चाहिँ हुनेगर्छ । यसलाई सानो जुवाडे भन्ने गरिन्छ । सानो ठूलो जे भने पनि जुवा भनेको जुवा नै हो ।
कानुनले निषेध गरेको कुरा हो । त्यसैले कानुनले निषेध गरेको कुराहरू चाहे त्यो सानो होस् वा ठूलो होस् । त्यो चाहिँ गैर कानुनी नै हुन्छ, दण्डनीय हुन्छ । हामीले त्यो अर्थमा बुझ्ने गर्छौ । त्यसैमा बाजी राखेको, रकम ठूलो भयो, धेरै मानिसहरू नियन्त्रणमा आए भने ठूलो जुवाडे भन्ने चलन छ । तर त्यस्तो चाहिँ होइन् । जुवा खेल्ने सानो ठूलो सबैलाई दण्डनीय हुन्छ ।
प्रहरी–प्रशासनकै सेटिङमा जुवा खेलाईन्छ भन्ने गुनासोहरू आउँछन् नि ?
ति गुनासोहरू बेला मौका आउने गर्छ । कतिपय सन्दर्भमा सत्यता नहुँदा पनि मानिसहरू त्यस्ता टिकाटिप्पणी गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्छन् । त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि सबै इकाईहरूमा विशेषगरेर त्यहाँका इञ्चार्जहरूलाई निर्देशन गर्ने काम चाहिँ भएको छ । कुनै पनि त्यस्ता खालका गतिविधिहरूमा आफू संलग्न नहुनु होला र आफ्ना कुनै कर्मचारीहरू संलग्न हुन नदिनुहोला भनेर निर्देशन गरेका छौँ ।
यदि कोही कतै त्यस्तो छ वा हाम्रो प्रहरी कर्मचारी संलग्न भएको गुनासोहरू छ भने समय मै हामीलाई जानकारी गराईदिनुभयो भने उनीहरूलाई निरूत्साहित गर्नका लागि अथवा दण्डीत गर्नको लागि सहयोग पुग्छ । त्यस्तो कोही संलग्नता देखियो भनेपछि हामीले हाम्रो कर्मचारीलाई पनि कारवाही गर्छौ ।
देखे पनि नदेखे झै गर्छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
संलग्नता भयो भन्ने खालको प्रमाणसहितको कसैले पुष्टि गर्नुभएको छैन् । गुनासो गर्नुभएको छैन् । कहिलेकाहिँ गुनासोहरू आउने गरेको छ । त्यसमा पनि यो व्यक्ति संलग्ना छ । यो समयदेखि संलग्न छ, यसरी संलग्न छ भन्ने विना पुस्ट्याई कारवाही गर्न नसकिने र जसले आरोप लगाउनु हुन्छ उहाँहरूले पनि समग्ररूपमा आरोप लगाउने भएको हुनाले हामीलाई पनि कारवाही गर्न अलिकति अप्ठेरो हुन्छ । देखेको र सूचना पाएकोलाई कारवाही नगर्ने भन्ने हुँदै हँदैन् नि ?
पटका पड्काउनेलाई मात्र कारवाही होकी बेच्नेलाई पनि ?
पड्काउने, बेच्ने सबैलाई कारवाही हुन्छ । पटका बेचबिखन, उत्पादन, ओसारपसार र प्रयोग सबैलाई कारवाही हुन्छ ।
चाडपर्वलाई सद्भाव र सहिष्णुताको रूपमा मनाउनुस् । भाइचाराको पर्वको रूपमा मनाउनुस् । मनोरञ्जनको रूपमा चाहिँ लिनुस । पटका पड्काउने, जाँड रक्सी खाएर हो–हल्ला गर्ने, जुवातास जस्ता विकृतिजन्य गतिविधिहरू संलग्न हुने यस्ता कामहरू चाहिँ नगर्नुस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छ ।
यदि कोही कसैको त्यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्नता देखियो भनेपछि प्रचलित कानुन अनुसारको कारवाही हुने कुरा पनि जानकारी गराउँछु । तपाई सबैलाई दिपावलीको शुभकामना ।